Amal Khamis U doodayaasha iyo Qareenada | Shirkadaha Sharciga ee Dubai
Amal Khamis Advocates iyo Qareenada
Amal Khamis liiska qareennada, La taliyeyaasha Sharciga iyo Qareenada
Amal Khamis Advocates iyo lataliyeyaal sharci ayaa ah shirkad caalami ah oo laga aqoonsan yahay UAE oo leh rikoor dheer oo heer sare ah iyo hoggaamin xirfadeed oo ku taal Dubai, UAE. Waxaan haynaa in ka badan 50 sano oo waayo-aragnimo isugeyn ah.
Amal Khamis Advocates iyo la-taliyayaal sharciyeed ayaa macaamiisha siinaya adeegyo sharciyeed oo macaamiishu ku salaysan oo qiimo leh oo ka duwan shirkadaha waaweyn ee ganacsiga ganacsiga. Shirkadeena waxay ku faantaa habka u-eegista iyo shakhsi ahaaneed ee macmiil kasta. Waxaan si dhow ula shaqeynaa macaamiisheena si ay u ogaadaan oo ay hirgeliyaan xalal sharciyaysan oo habboon oo sida ugu fiican u buuxiya baahidooda. Amal Khamis Advocates iyo la-taliyayaal sharciyeed ayaa qabta macaamil ganacsi iyo khilaafyo iyada oo la mid ah ladnaanta iyo xoojinta haddii macmiilkayagu yahay shirkad Fortune 500 ama ganacsi yar oo gaar loo leeyahay.
Xubnaha xafiiskayaga: -
Xafiiskayagu aad ayuu ugu faraxsan yahay waayo-aragnimada kala duwan ee wakiil ka ah xubnahayaga xafiiskeena:
Mrs Advocate: Amal Khamis - Qaran UAE
Mrs Advocate: Amal Khamis - Isbahaysiga UAE- U doodaha iyo la taliyaha sharci. Waxay tahay aasaasaha ururka Amal Khamis Advocates iyo Xafiiska La-taliyaha Sharciga. Waxay ka qalin jabisay Jaamacadda Sharciga iyo Sharciga (LLB) - Jaamacadda UAE.
Amal Khamis waa qareen sare Amal Khamis Advocates and Legal Consultants Law Firm. Waxay leedahay khibrad ballaadhan oo ku takhasustay sharciga ganacsiga, sharciga shaqada, sharciga dhismaha, sharciga saxaafadda, khilaafaadka shirkadaha.
Waxay ku hawlaneyd macaamilo ganacsi oo sareeya iyo arrimaha xalinta khilaafaadka. Waxay la shaqaysaa macaamiisheena si ay u xalliso arrimo badan oo ganacsi oo ka hortagaya hawlgallada maalinlaha ah ee macaamiisheena.
Waxay ka shaqeyneysaa dhammaan dhinacyada dacwadaha ka soo baxa caymiska iyo arimaha xun ee iimaanka iyo meelahaas oo ay ka mid yihiin masuuliyad xirfadeed, burbur hanti, iyo subrogation. Waxa kale oo ay leedahay khibrado badan oo ku saabsan noocyada kala duwan ee hantida maguuraanka ah iyo macaamilka ganacsiga iyo dacwadaha, oo ay ka mid yihiin samaynta, iibsashada iyo iibka, maalgelinta, iyo kireynta.
Mudane Alaa Jaber Muhammad Al Hoshy - wuxuu ka qalin jabiyay kuliyada sharciga (LLB), kana soo baxay jaamacada Alexandria; Kahor aasaasida shirkadda Amal Khamis, wuxuu u shaqeeyay shirkad caan ah oo sharci yaqaan oo ku taal Imaaraatka kana shaqeysa 'Hashim Al Jamal doodayaasha iyo la taliyayaasha sharciga' oo ah la taliyahooda sharciga iyo La-Taliyaha Sharciga ee Guriga.
Khibradihii hore ee sanadihii 15 sida lataliyaha sharciga ah ee labada shirkadood ee maal-gashaday iyo shirkadaha qandaraaslayaasha ah ee ay la socdaan asalkiisa sharciga ah wuxuu u ogolyahay in uu si qoto dheer u fahmo cabsida macaamiishiisa iyo in uu kugula taliyo inay si wax ku ool ah u qoondeeyaan khatarta ku haboon ee ganacsigooda.
Mudane Alaa wuxuu kula taliyey dhowr shirkadood oo maxali ah iyo kuwo shisheeye ah, waxaanay kala shaqeeyeen arrimo badan oo shirkad, ganacsi iyo sharciyo caalami ah iyo kuwo degaan ah oo ku saabsan dhinacyo kala duwan oo ka mid ah qodobada UAE oo ay ku jiraan wadaxaajoodyo iyo shirkado wadaag ah; heshiisyada horumarinta mashruuca, heshiisyada horumarinta mashruuca, bixinta talo sharci oo ku saabsan macaamilka ganacsiga, sharciga tartanka, maaliyadda mashruuca, qaaska, sharciga caafimaadka, sharciga tamarta iyo arrimaha sharciyeynta, hindisada dadweynaha, sharciga dhismaha, Mashruucyada EPC , sharciga shaqada, sharciga canshuurta iyo maalgelinta shisheeye.
Mr. Alaa wuxuu ka shaqeeyaa aagagga caymiska, hantida maguurtada, ganacsiga iyo sharciga ganacsiga, isagoo xoogga saaraya caymiska, dacwadaha madaniga ah, hantida maguurtada iyo ganacsiyada ganacsiga.
Mudane Salam Al Jabri - qareen qibrad leh oo khibrad leh, oo ka shaqeeya Imaaraadka Carabta tan iyo 2006 ilaa hadda.
Waxa uu xalliyay dhammaan qaybaha dacwadaha dhammaan maxkamadaha UAE, oo ay ku jiraan khilaafyada ganacsiga iyo ganacsiga, dacwadaha, qulqulka, garqaadista, dhexdhexaadinta, shirarka dejinta.
Wuxuu gacan ka geystay hawlaha diyaarinta dhowr jeer oo kala duwan oo ku saabsan arrimaha maxkamadaynta madaniga ah waxayna diyaariyeen oo ku doodeen dhowr sharci oo hirgalisey iyo dhaqdhaqaaqyo kala duwan, oo ay ka mid yihiin ujeedooyinka la soo daayo iyo xukunka kooban, oo horseedi kara xalinta guuleysiga iyo dejinta ugu wanaagsan.
La-talinta horumarinta hantida ee la xiriira arrimaha arimaha dhulka oo ay ka mid yihiin diyaarinta qandaraasyada hoos-ku-meel-gaar ah, kiraysiga, ruqsadaha, qoditaanka, xayiraadaha xaddidan, iyo waraaqaha maareynta. Soo bandhigida waraaqaha sharciga ah ee macaamiisha iyo macaamiisha ku jira shuruudaha heshiiska qandaraaska ah oo ay ku jiraan waajibaadka ah inay ku dhaqmaan rumaysiga wanaagsan ee wadaxaajoodka qandaraaska, sharciyada qawaaniinta aan caddaalad ahayn, arrimaha la xiriira hirgelinta qandaraaska dhulalka dhulalka, dhulka kirada, Xeerka Guddiga
Sayed Muhammad Abdul Aziz
Mudane Sayed Muhammad Abdul Aziz - u doodaha iyo lataliyaha sharciga ee Hindida - oo ka qalin jabiyay Kuliyada Sharciga - wuxuu ka shaqeeyey Isutaga Imaaraatka Carabta mudo 15 sano ah iyo Hindiya mudo 14 sano ah dhamaan noocyada kiisaska.
Inay bixiyaan talooyin ku saabsan maaraynta sheegashada iyo istaraatiijiyada, qadarka, dacwadaha, lacagaha qandaraaska, xalinta khilaafaadka, sharciga guud ee la soo gudbiyo iyo tirada, masuuliyadda, iyo soo kabashada. La-talinta arrimaha kala duwan ee caymiska, gaar ahaan meelaha magdhawga shaqaalaha / magdhawga shaqaalaha. Sheegashada sharciga ee caadiga ah ee ku lug leh loo-shaqeeyaha iyo dhinacyada saddexaad. Xaaladaha Darxumo Caafimaad, Shil gaari, masuuliyad dadweyne, shil diyaaradeed, iyo sheegashada kale ee sharciga ah.
Meelaha ugu muhiimsan ee khibradda leh waxaa ka mid ah joojinta shaqaalaynta (shaqo xumida, ilaalinta guud, jebinta qandaraaska qandaraaska), Wadaxaajoodka gorgortan ee shirkadda, Maareynta waxqabadka, iyo Xiriirka Ganacsiga ee HR, Sharciga Istaraatiijiga ah iyo sharciga shaqada, Maaraynta khilaafaadka warshadaha, Isbeddelka goobta shaqada iyo ururrada dib-u-habeynta iyo caafimaadka shaqada iyo ammaanka.
Waxyaabo badan oo dhowaan ah, qaybaha sharciga ah ee kombiyuutarka, oo ay ku jiraan maareynta shakhsiyaadka shakhsiga ah ee hoos imaanaya shuruudaha cusub ee khasabka ah ee warbixinta jebinta sharciyada iyo sharciyada ciqaabta.
Mrs. Mona Ahmad Fawzy - Waxay leedahay in ka badan 10 sano oo waayo aragnimo ah qeybaha kala duwan ee sharciga oo ay ku jiraan dacwadaha ficil ee heerka, dacwad wadareedyo badan, sharciga dhismaha, xukunada iyo aruurinta Dubai iyo UAE, sharciga dhismaha, dacwada ganacsiga, sharciga qoyska , iyo dacwadaha guud ee madaniga ah. Waxay si firfircoon uga qayb qaadatay maaraynta Xafiiska, dhacdooyinka Gudaha. Waxay sidoo kale tahay Maareeyaha xiriirka dadweynaha ee xafiiska.
Waxay khibrad ku kasbatay: Degsiimooyinka Deganaanshaha, Hantida Ganacsi; Degsiimooyinka Ganacsi; Araajida Ruqsadaha Liquer; Diyaarinta dukumiintiyada amniga ee heerarka labaad iyo saddexaad iyo amaahda gaarka loo leeyahay; iyo Caawinta diyaarinta Wills & Probate iyo Kireynta Tafaariiqda.
Waxay sidoo kale leedahay dhaqdhaqaaqyo badan oo kala duwan ee Maareynta iyo Bangiga iyo Arrimaha Maaliyadeed ee Macaamiisha Macaamiisha, Lending and Body Statutes - oo dhammaan noocyada kala duwan ee qaybaha; Kordhinta Mudnaanta leh; Habdhaqanka iyo Sumeeyayaasha Isafgaradka; Wareejinta Qorshaha Hantida Beeraha; Bedelaadaha Dhulka ee udhaxeeya dhinacyada la xiriira;
Mr. Raj Jain - Isku-duwaha Sharciga- Waxa uu si firfircoon uga qayb qaataa dhammaan dhinacyada taageerada dacwadaha, oo ay ka mid yihiin diyaarinta qorista iyo waraaqaha, ka qaybgalida dib u eegista dukumeentiga iyo la macaamilka macaamiisha, qareennada, khabiirada, shaqaalaha maxkamadda, iyo hay'adaha maamulka.
Wuxuu heystaa wax ka badan 7 sano oo waayo-aragnimo ah isaga oo ah isku-xiraha sharciga oo leh khibrad ballaaran oo caymiska ugu horreeya iyo kan saddexaad ee caymiska, dacwadaha, dhismaha, sharciga guryaha, sharciga qoyska, dhaawaca shakhsiga, dembi, ganacsiga iyo sharciga shirkadaha.
Meelaha ugu muhiimsan ee farsamooyinka waxaa ka mid ah: Khasaaro ganacsi iyo shakhsiyad; Soo celinta deynta;
Khilaafaadka heshiiska; Dacwad oogista sharciga; Dardaaranka, guryaha & kalsoonida khilaafaadka; Sharciga guud dacwada dhaawaca shaqsiyeed;
Axmed Maxamed Maxamed
Mudane Axmed Maxamed - Wuxuu ka mid yahay u-doodayaasheena sare, wuxuu ka shaqeynayay Imaaraadka Carabta tan iyo 2007 illaa iyo hadda.
Wuxuu talooyin siinayaa dhammaan dhinacyada xiriirka shaqada ee macaamiisha oo dhan oo dhan iyo khibrad u leh xirfado badan oo ay ka mid yihiin Xalinta Khilaafaadka Ganacsiga, dhismaha, macdanta, saliida iyo gaaska, wax soo saarka, waxbarashada iyo tafaariiqda.
Khibradihiisa waxaa ka mid ah: Shirkadaha ganacsiga iyo ganacsiga, oo ay ku jiraan arrimaha ku saabsan iibsashada iyo iibinta, heshiisyada saamileyda, qandaraasyada guud ee ganacsiga iyo degsiimooyinka. Arrimaha ku saabsan qorshaynta guryaha, oo ay ku jiraan rabitaanada, adkeynta awoodda qareenka, adkeynta awoodaha ilaalinta iyo dardaarinta caafimaadka. Arrimaha maareynta arimaha guryaha ee la xidhiidha hantida meydka ah (iyaga oo metelaya shakhsiyaadka iyo shirkadaha wakiilada).
Arrimaha la xiriira hantida oo ay ku jiraan kireysiga, iibsashada hantida, qashinka, sifooyinka iyo degsiimooyinka.
Mr. Ihab Al Nuzahi Waxa uu udub dhexaad u yahay aqoonyahanno khibrad leh, oo ka shaqeeya Imaaraadka Carabta tan iyo 2013 ilaa hadda.
Xayiraadda khilaafaadka warshadaha badan, sheegashada guud ee ilaalinta iyo jebinta qandaraaska qandaraaska ee warshadaha iyo maxkamadaha UAE. Wuxuu wakiil ka yahay shirkadaha wakiilada, hay'adaha maaliyadeed, wakiilada, wakiillada iyo shakhsiyaadka iyagoo bixinaya talooyin iyo dhaqdhaqaaqyo ku saabsan degsiimada hantida, arrimaha amniga iyo maamulka guryaha.
Mr. Alaa Sayed Abbas - Waa sharci yaqaan xirfad leh, oo ka shaqeeya Imaaraadka Carabta tan iyo 2013 ilaa hadda.
Waxa uu kula taliyay shirkadaha gaarka loo leeyahay iyo kuwa guud inay la xiriiraan heshiisyada ganacsiga oo ay ka mid yihiin qandaraasyada dhismaha, qandaraasyada bixinta badeecadaha iyo adeegyada, qandaraasyada iibka dhulka, heshiisyada maareynta, deynka, shaleecada, awooda qareenka iyo heshiisyada ruqsadaha.
Mr. Al Gendi Ahmed Al Gendi - Qareen khibrad iyo qaddarin ku leh dalka Imaaraadka. Khabiir ku ah Ganacsiga iyo Muranka Ganacsi, Macaamil Ganacsi, Kiisaska Maaliyadeed, Isku biiritaanka & La Wareegyada.
Qorsheynta iyo la-talinta kirooyinka, ruqsadaha, qodobbada, qandaraasyada horumarinta dhulka, iyo heshiisyada horumarinta ee horumarinta. Diyaarinta iyo la-talinta qandaraasyada iibka iyo iibsiga guryaha, ganacsiyada iyo shirkadaha.
Waxa uu leeyahay waayo-aragnimo mug leh oo ku saabsan aagagga qorsheynta guryaha, maaliyadda iyo hantida. Wuxuu u dhaqmaa amaahiyaha, hanti-kororsiga, wakiilada guryaha, xisaabiyeyaasha iyo shirkadaha wakiilada.
Mr. Khaled Elnakib - oo ah qareen sare oo xirfad leh, oo ka shaqeeya Imaaraadka Carabta tan iyo 2007 ilaa hadda.
Waxa uu leeyahay qibrad heer sare ah oo khibrad u leh ururrada sharciga iyo loo shaqeeyaha. Dhaqanku wuxuu diiradda saarayaa dacwadaha madaniga ah ee meelaha khilaafyada ganacsiga iyo ganacsiga, hantida maguurtada, sharciga dhismaha, iyo masuuliyadda xirfadeed. Wuxuu ogyahay dhammaan dhinacyada maxkamadaha iyo dacwadaha maxkamada federaalka ee UAE, oo ay ku jiraan falanqaynta codsiga, helitaanka, xallinta khilaafaadka kale, diyaarinta tijaabada, iyo maxkamadeynta.
Waxa kale oo uu wakiil ka ahaa macaamiisha dacwadaha xalinta khilaafaadka iyada oo loo marayo dhexdhexaadin ikhtiyaari ah iyo shirarka dejinta ee maxkamadda. Wuxuu soo kaxeeyaa sannadkii 10 waayo-aragnimada ganacsiga, difaaca caymis, sharci xumo iyo sidoo kale daroogada iyo qalabka daaweynta.
Ms Nourhan Mohamed Adawy - Haysashada taariikh nololeed iyo khibrad iyo ka shaqeynta xafiiskayaga sharciga ee Dubai tan iyo 2015 ilaa hadda.
Xirfad sare oo khibrad u leh sharciga dhismaha, dacwadaha ganacsiga, sharciga qoyska, iyo dacwadaha guud ee madaniga ah. Waxay gacan ka gaysatay hawlaha diyaarinta dhowr marxaladood oo kala duwan oo ku saabsan arrimaha maxkamadaynta madaniga ah waxayna diyaariyeen oo ku doodeen dhowr sharci oo ku-meel-gaar ah iyo mawaadiic dhaqdhaqaaq, oo ay ka mid yihiin ujeedooyinka la soo daayo iyo xukunka kooban, oo horseedi kara xalinta guuleysiga iyo dejinta ugu wanaagsan.
Waxay si firfircoon uga qayb gashay dhammaan dhinacyada taageerada dacwadaha, oo ay ka mid yihiin diyaarinta qorista iyo waraaqaha, ka qayb galka dib-u-eegista dukumintiga, cilmi-baarista, iyo la macaamilka macaamiisha, qareennada, khabiirada, shaqaalaha maxkamadda, iyo hay'adaha sharciga.